Iindaba-Intshayelelo kumbhobho ongenamthungo
Umbhobho wesikwere ongenamthungo luhlobo lwentsimbi ende enamacandelo angenanto kwaye akukho malungu ayijikelezileyo. Umbhobho wesinyithi onamacandelo angenamacala asetyenziselwa ukuhambisa ulwelo, njengokuhambisa ioyile, igesi yendalo, irhasi, amanzi kunye nezinye izinto eziqinileyo. kunye nenye intsimbi eqinileyo, ityhubhu yentsimbi luhlobo lwecandelo lesinyithi elinamandla afanayo kunye namandla oxinzelelo kunye nobunzima bokukhanya. It isetyenziswa ngokubanzi ekwenziweni kwamalungu ezakhiweyo kunye namacandelo oomatshini, njengombhobho we-oyile, umbhobho wokuhambisa imoto, isakhelo sebhayisikile kunye ne-steel scaffolding esetyenziswa kulwakhiwo. ixesha kunye nokulungiswa kwezinto, njengokuqengqeleka kwebhasi.
Okwangoku, umbhobho wesinyithi usetyenziswe ngokubanzi ukwenza iringi kunye ne-jack sleeve.Steel pipe okanye iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo eziyimfuneko, umpu wombhobho, umphanda kumbhobho wentsimbi yokwenza.Iityhubhu zensimbi zingahlula zibe yimibhobho ejikelezileyo kunye nemilo ekhethekileyo Iityhubhu ngokobume bendawo enqamlezileyo.Ngoko isangqa sinendawo enkulu enesangqa esifanayo, ulwelo oluninzi lunokuhanjiswa ngombhobho wesetyhula.Ukongeza, xa icandelo le-annular lithwele uxinzelelo lwangaphakathi okanye lwangaphandle, umkhosi iyunifomu engaphezulu, iityhubhu ezininzi zentsimbi ziityhubhu ezijikelezileyo, nangona kunjalo, umbhobho wesetyhula nawo unemiqobo ethile, njengaphantsi kwemeko yokugoba kwendiza, umbhobho wesetyhula awomelelanga njengesikwere, uxande lokugoba umbhobho, isakhelo soomatshini bezolimo, ifanitshala yentsimbi kunye neenkuni, njl., ziqhelekileyo zisetyenziswa isikwere, uxande umbhobho. Ezinye iityhubhu zentsimbi ezimilise okhethekileyo ezinemilo eyahlukeneyo yecandelo ziyafuneka ngokweMISEBENZI eyahlukeneyo.
Ngokweendlela ezahlukeneyo zemveliso zingahlulwa zibe ngumbhobho oshushu, umbhobho wokugodola obandayo, umbhobho wokuzoba obandayo, umbhobho we-extrusion njalo njalo.
1.1. Ityhubhu eqinileyo ityhubhu yanqunyulwa yangamacandelo emva kokuhlolwa kunye neziphene zomhlaba zacocwa.
Ubude obufunekayo buya kugxila kubuso bokugqibela betyhubhu yombhobho, emva koko ithunyelwe kwiziko lokufudumeza ukufudumeza kunye nokugqobhoza kwipuncher.
Ujikelezo oluqhubekayo kunye phambili, phantsi inyathelo mqengqeleki kunye nentloko, engenanto ngaphakathi ngokuthe ngcembe kwasekwa kwisisu, eyaziwa ngokuba ityhubhu capillary.
Ukuziqengqeleka kuyaqhubeka kumbhobho wokugaya.Ngokugqibela, ubukhulu bodonga buhlengahlengiswa ngumatshini uphela kwaye ubukhulu bugqitywa ngumatshini wokulinganisa ukuhlangabezana neemfuno.Use uhambisa umbhobho oqhubekayo
Ukuveliswa kumbhobho wesinyithi oshushu ojikeleziweyo yindlela ehamba phambili.
1.2. Kwimibhobho encinci kunye nomgangatho ongcono ongenamthungo, ukuqengqeleka okubandayo, ukuzoba okubandayo okanye ukudityaniswa kwezi zimbini kufuneka kwamkelwe.
Indlela.Ukuqengqeleka kobandayo kuhlala kwenziwa kwilitye lokusila eliphakamileyo. Ityhubhu yentsimbi ngumngxunya wesetyhula kumjelo osetyhula onentloko yeekhowuni esisigxina kunye necandelo eliguqukayo.
Rolling.Cold Umzobo obandayo uhlala uqhutywa kwi-0.5 ~ 100T yetsheyini enye okanye umatshini wokuzoba obandayo kabini.
1.3 Kwindlela ye-extrusion, ityhubhu eshushu engenanto ibekwe kwisilinda ye-extrusion evaliweyo, kwaye intonga eyenziwe ngomthi kunye nentonga ye-extrusion iyahamba ukwenza
I-extruder ikhutshiwe kumngxunya omncinci wokufa.Le ndlela inokuvelisa umbhobho wentsimbi enobubanzi obuncinci.
2. Uvavanyo lokwenziwa kweekhemikhali
2.1 Iibhubhu zasekhaya ezingenamthungo zibonelelwa ngokobume beekhemikhali kunye neepropathi zoomatshini, ezinje ngezinto: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45 Astm a106 Astm a53
Ukwenziwa kwemichiza hayi. Izinyithi ezingama-50 ziyakuthobela imiqathango ye-GB / T699-88. Imibhobho engenamthungo engeniswe elizweni iya kuhlolwa ngokwemigangatho efanelekileyo echazwe kwisivumelwano.
I-09MnV, i-16Mn kunye ne-15MnV yokwenziwa kweekhemikhali zentsimbi ziya kuthi zihambelane nezibonelelo ze-GB1591-79.
2.2 Jonga icandelo elifanelekileyo le-GB223-84 yeendlela zoHlolo lweKhemikhali zentsimbi kunye neAlloy ngeendlela ezithile zohlalutyo.
2.3 Uhlahlelo lokuphambuka kubhekisa kwi-GB222-84 "Ukuphambuka okuVumelekileyo koKwenziwa kweeKhemikhali zeSampulu kunye neeMveliso ezigqityiweyo zoHlalutyo lweNtsimbi".
3. Ukuhlolwa kwentsebenzo yomzimba
3.1 Umbhobho wasekhaya ongenamthungo unikezwe ngokwendlela yokusebenza, i-carbon yentsimbi eqhelekileyo ngokwe-GB / T700-88 yodidi lokuvelisa isinyithi (kodwa kufuneka
Qinisekisa ukuba umxholo wesalfure awudluli kwi-0.050% kwaye umxholo we-phosphorus awugqithi kwi-0.045%), iipropathi zayo zoomatshini kufuneka zingqinelane netafile ye-GB8162-87
3.2 Imibhobho engenamthungo yasekhaya ebonelelwe ngovavanyo lwe-hydrostatic kufuneka iqinisekise uvavanyo lwe-hydrostatic oluchazwe kumgangatho.
3.3 Ukuhlolwa kokusebenza kwembhobho engenamthungo engeniswe ngaphandle iya kuqhutywa ngokwemigangatho efanelekileyo ebekiweyo kwisivumelwano.
2.1. Umbhobho ongenamthungo osetyenzisiweyo usetyenziswa ngokubanzi kumbhobho wesinyithi oqhelekileyo kunye nolwakhiwo olusezantsi
Isinyithi okanye ingxubevange yokuqengqeleka kwesakhiwo sentsimbi, eyona mveliso inkulu, esetyenziselwa ukuhanjiswa kwemibhobho enamanzi okanye iinxalenye zesakhiwo.
2.2 Iintlobo ezintathu zonikezelo ngokweMISEBENZI eyahlukeneyo: A. Ukubonelela ngokobunjani bemichiza kunye neepropathi zoomatshini; B. Ukubonelela ngokusebenza komatshini; C,
Imibhobho yesinyithi ebonelelwe phantsi kweeklasi A kunye no-B ziya kufakwa kuvavanyo lwe-hydrostatic ukuba ziya kusetyenziselwa ukuthwala uxinzelelo lolwelo.
2.3 Imibhobho engenamthungo yeenjongo ezizodwa ibandakanya ukubilisa imibhobho engenamthungo, imibhobho yokuma komhlaba engenamthungo kunye nepetroleum imibhobho engenamthungo.
4.1 ngokweendlela ezahlukeneyo zemveliso, iityhubhu zensimbi ezingenamthungo zinokwahlulwa zibe ngumbhobho oshushu oshushu, umbhobho oqengqelekileyo obandayo, umbhobho obandayo otyhidiweyo, umbhobho wokukhupha, njl.
4.2 Kukho iityhubhu ezijikelezayo kunye neetyhubhu ezime okhethekileyo ngokwembonakalo yazo.Ukongeza kwimibhobho yesikwere kunye noxande, iityhubhu ezime ngokukodwa zikwanemibhobho ye-elliptical, Semicircular, engunxantathu, ezinamacala, khaxa, ezimilise-ezimile, njl
4.3 Ngokwezixhobo ezahlukeneyo, inokwahlulwa ibe ityhubhu yesakhiwo sekhabhoni eqhelekileyo, ityhubhu yesakhiwo esine-alloy esezantsi, umgangatho ophezulu wombhobho wesakhiwo sekhabhoni kunye nokudibana kwendibano Umbhobho wokwakha, umbhobho ongenasici, njl.
4.4 Ngokwenjongo ekhethekileyo, kukho iibhobho zokubilisa, iityhubhu zejoloji, umbhobho wepetroleum, njl.
5. Ukucaciswa kunye nomgangatho wokubonakala
Umbhobho eriyeli ngokungqinelana nezibonelelo GB / T8162-87
5.1. Ingcaciso: Hot asongwe umbhobho ubukhulu 32 ~ 630mm. Udonga ubukhulu yi 2.5 ~ 75mm. Ehlelayo Cold (umzobo abandayo) umbhobho ubukhulu 5 ~ 200mm.
Ubungakanani bodonga yi-2.5 ~ 12mm.
Umgangatho we-5.2: Inkangeleko yangaphakathi kunye nangaphandle yeetyhubhu zentsimbi aziyi kuba neentanda, ii-rolls, ii-rolls, i-delaminations, ii-airways okanye iziphene
Unyaka wonke ezi ziphene kufuneka zisuswe ngokupheleleyo kwaye ubukhulu bodonga kunye nobubanzi bangaphandle akufuneki bugqithe kokutenxa okungalunganga emva kokususwa.
5.3 Zombini iziphelo zombhobho wentsimbi kufuneka unqunyulwe kwii-engile ezilungileyo kwaye i-burrs kufuneka isuswe. Ukusika igesi kunye nokusika isarha kuvunyelwe kuvunyelwe iityhubhu zentsimbi ezinobunzima bodonga obungaphezulu kwe-20mm
Sika, ayinakusikwa ngesivumelwano phakathi komthengi kunye nomthengisi.
4.4 Umgangatho wobume bemigca yesinyithi etsalwa kubanda okanye eqengqelekileyo iya kubhekisa kwi-GB3639-83.
Njengoko kuchaziwe kwi-GB2102-88 Kukho iintlobo ezintathu zokupakisha umbhobho wensimbi: ukubopha, ukupakisha, ukubopha ioyile okanye ukupakisha ioyile. Ityhubhu yentsimbi Umtya omde wentsimbi kunye nomngxunya ongashukumiyo kwaye akukho malungu ajikelezileyo Ityhubhu yentsimbi enamacandelo angenamanzi isetyenziselwa ukuhambisa ulwelo Umbhobho, ofana nalowo uphethe ioyile, irhasi yendalo, irhasi, amanzi, kunye nezinto ezithile eziqinileyo. Xa kuthelekiswa nentsimbi ngeenxa zonke kunye nezinye intsimbi eqinileyo, Luhlobo lwentsimbi enqamlezileyo yecandelo lesinyithi elinamandla afanayo e-torsional kunye nobunzima bokukhanya. Isetyenziswa ngokubanzi ekwenziweni kweendawo zokwakha kunye neendawo zoomatshini.
Njengepayipi yokugrumba ioyile, imoto shaft shaft, isakhelo sebhayisikile kunye ne-steel scaffolding esetyenziswa kulwakhiwo. Ngaba ukuphucula ukusetyenziswa eziphathekayo, lula inkqubo yokuvelisa, ukugcina izinto kunye nexesha processing, ezifana lothuli ukuzala ring, sleeve jack, njl
Okwangoku, umbhobho wentsimbi ubusetyenziswa ngokubanzi kumbhobho wokwenza umbane. Intsimbi okanye iintlobo zezixhobo eziqhelekileyo eziyimfuneko, umpu wombhobho, umphanda, njl.
Iityhubhu zensimbi zingahlulwa-hlulwa zibe ziityhubhu ezijikelezileyo kunye neetyhubhu ezimile ngokukodwa ngokobume bendawo enqamlezileyo.Ngokuba umjikelezo uyafana, umphezulu wesangqa
Umthamo omkhulu, ulwelo oluninzi lunokuhanjiswa kumbhobho osetyhula.Ukongeza, icandelo lesangqa liphantsi koxinzelelo lwangaphakathi okanye lwangaphandle
Amandla afanayo, ke uninzi lweetyhubhu zentsimbi ziityhubhu ezijikelezileyo.
Nangona kunjalo, umbhobho unemida ethile. Umzekelo, phantsi kwemeko yokuthotyelwa kokugoba kwenqwelomoya, umbhobho awuxhathisi kakhulu ukugoba kunombhobho wesikwere kunye nombhobho oxande
Amandla makhulu, isakhelo soomatshini basefama abambalwa kunye nokuphumeza, ifanitshala yeplanga yentsimbi ixhaphake kusetyenziswa isikwere, uxande ityhubhu.Amanye amacandelo eminqamlezo ayadingeka ngokweMISEBENZI eyahlukeneyo
Umbhobho wesinyithi obunjiweyo ubumbene.Kufuneka unxulunyaniswe noluhlu olubanzi: umbhobho wokuhambisa ulwelo, isityalo sebhoyila, ubunjineli, oomatshini bokulungisa oomatshini.